IOS 12: iindaba, izixhobo ezihambelanayo, indlela yokufaka kunye nokunye okuninzi | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | iapile, Iiselfowuni, Tutorials
Umhla ababewulindile abasebenzisi abaninzi ufikile. Kwimizuzu embalwa, inkampani enxaniweyo eCupertino yenze ukuba ifumaneke kubo bonke abasebenzisi be-iPhone kunye ne-iPad, ithuba lokufaka ingxelo entsha ye-iOS, inombolo ye-12, inguqulelo efikelela kwintengiso ngeendaba ezibalulekileyo, nangonahayi zininzi njengoko kunokulindelwa ekuqaleni.
Kule nguqulo intsha, njengoko bekuxeliwe kwiinyanga ezidlulileyo, iApple igxile ekuphuculeni ukusebenza kwe-iOS kuzo zonke izixhobo ezihambelanayo, into emele ukuxabiseka, kuba kwiminyaka yakutshanje ingxelo nganye entsha ibonakala ngathi yenzelwe ukuthoba isantya, ngakumbi , izixhobo ezindala. Apha siyakubonisa Zonke iindaba ze-iOS 12, izixhobo ezixhaswayo, indlela yokuzifaka...
1 IOS 12 Izixhobo ezihambelanayo
2 Uyifaka njani i-12 XNUMX
3 Yintoni entsha kwi-iOS 12
3.1 Ukuphucula ukusebenza kwizixhobo ezindala
3.2 Izaziso ezidityaniswe ziapps
3.3 Iindlela ezimfutshane zikaSiri
3.4 I-Animojis yesiqhelo
3.5 Sisebenzisa njani isixhobo sethu
3.6 Musa ukuphazamisa imo ehlaziyiweyo
3.7 Ezinye izinto ezintsha
IOS 12 Izixhobo ezihambelanayo
IOS 11 yathetha ukushiywa ngokupheleleyo yiApple yezixhobo ezineeprosesa ezingama-32, zibe sesona sixhobo sidala esihambelana ne-iOS 11, i-iPhone 5s, isixhobo esineminyaka emi-5 kwintengiso kunye ne-iPad Mini 2, imodeli endala ye-iPad. Ukuba ufuna ukwazi, ukuba isixhobo sakho siyahambelana ne-iOS 12, apha ngezantsi sikubonisa zonke iimodeli ezihambelana nale nguqulo intsha ye-iOS:
IPad Pro 12,9? (isizukulwana sesibini)
IPad Pro 12,9? (isizukulwana sokuqala)
iPod touch isizukulwana sesithandathu
Ukongeza kwezi zixhobo, ngokucacileyo iimodeli ezintsha ze-iPhone zika-2018 ezisandula ukuboniswa ziyahambelana ne-iOS 12. Njengoko sibona kolu luhlu, i-iPhone 5s, imodeli eyafika kwimarike ngo-2013, iya kufumana enye Inkxaso yonyaka evela kuApple, yiyo loo nto iba Imodeli ye-Apple efumene uhlaziyo kwinkampani ngowona nyaka mde.
Ukuhamba okunjalo Akucingeki namhlanje kwi-ecosystem ye-Android, Apho abavelisi abaphambili, ubukhulu becala, banikezela ngeminyaka emi-3 yohlaziyo, uhlaziyo olungasoloko lucinga ngohlaziyo lwenkqubo yokusebenza, kodwa lujolise ekunikezeleni ngokhuseleko kuphela kubungozi obufunyenwe kule nkqubo yokusebenza.
Uyifaka njani i-12 XNUMX
Inkqubo yokufaka i-iOS 12 ilula kakhulu kwaye ayifuni ulwazi olubanzi lwenkqubo yokusebenza. U-Apple uhlala eqhayisa ngokunikezela ngenkqubo yemenyu elula kakhulu, kubandakanya nenkqubo yokuhlaziya, ukuze sikwazi ukwenza le nkqubo ngokukhawuleza okukhulu, nokuba ixesha lokufaka lithatha ubuncinci sisiqingatha seyure.
Phambi kokuqala kofakelo, kufuneka senze iakhawunti yesixhobo esine-iTunes, ukuze sibe nayo ukhuphelo lwesixhobo sethu, kwimeko apho izixhobo zethu zinengxaki yobunzima ngexesha lofakelo kwaye siphulukana nalo lonke ulwazi olugciniweyo, oluya kusinyanzela ukuba senze ufakelo kwasekuqaleni
Enye into emele igcinwe engqondweni kukuba nanini na xa kufakelwe uhlobo olutsha lwe-iOS, kuyacetyiswa yenza ufakelo olucocekileyo, ngaphandle kokubuyisela ikopi yogcino, ukuthintela iingxaki ezinokubakho zekhompyuter yethu. Enkosi ku-iCloud, kulula kakhulu ukwenza njalo ngaphandle koloyiko lokuphulukana naluphi na ulwazi olufanelekileyo.
Nje ukuba senze ugcino, ukuba kukho into engaphumeleliyo ngexesha lenkqubo, okanye nangona sithathe isigqibo sokwenza ufakelo olucocekileyo, kufuneka silandele la manyathelo alandelayo.
Kuqala siya kwifayile ye- Useto Isixhobo sethu.
Emva koko, cofa apha ngokubanzi.
KwiCandelo ngokubanzi, cofa apha Uhlaziyo lwesoftware.
Ngelo xesha, iqela liya kusibonisa ukuba siluhlaziye njani ulindelo olutsha. Kufuneka nje ucofe ku Khuphela kwaye ufake.
Le nkqubo kufuneka yenziwe xa i-terminal ilayisha kunye ingathabatha isiqingatha seyure malunga nexesha apho isixhobo singazukusebenza, kuyacetyiswa ukuba sikwenze xa silala okanye xa sisazi ukuba akusayi kufuneka sisebenzise isixhobo.
Yintoni entsha kwi-iOS 12
Ukuphucula ukusebenza kwizixhobo ezindala
Njengoko iApple ikhupha ingxelo entsha ye-iOS, abasebenzisi abaninzi bathi izixhobo zabo ezindala, nokuba banonyaka ubudala, bayacotha, kukhokelela kwiingcinga zelenqe malunga nokuphelelwa lixesha. Ithiyori leyo yachithwa xa kwafunyaniswa ukuba eyona nto yayisenziwa yiApple yayikukunciphisa ukusebenza kweemodeli ze-iPhone ibhetri yayo yayingekho kwimeko efanelekileyo, ukuze kwandiswe ubomi bebhetri.
U-Apple wanyanzelwa ukuba akhuphe uhlaziyo oluvumelekileyo khubaza oku kuthotywa, Ukushiya kuye kumsebenzisi ukuba akhethe ukunciphisa ukusebenza kwesiphelo ukuba ibhetri ibingekho kwimeko entle. Ukuyeka ecaleni yonke impikiswano ejikeleze iApple kulo nyaka uphelileyo, inkampani esekwe eCupertino ijolise kulo nyaka ekuphuculeni ukusebenza kwezixhobo ngokubanzi, le yenye yezona ndaba ziphambili nezona zibalaseleyo zivela kwisandla se-iOS 12.
Izaziso ezidityaniswe ziapps
Ulawulo lwezaziso kwi-iOS rhoqo ibe yintlekele. Ngokufika kwe-iOS 12, ezi zinto ekugqibeleni zidityaniswe ngokusetyenziswa, endaweni yokuba nganye iboniswe ngokuzimeleyo. Ukongeza, sinokuzicima izaziso zezicelo ezivela kuyo, ngaphandle kokungena kuseto lwayo.
Iindlela ezimfutshane zikaSiri
Yonke into ibonakala ibonakalisa oko I-Apple ayinakufumana uninzi lwabancedisi bayo, uSiri. Ukuzama ukujika uSiri abe ngumncedisi oluncedo ngakumbi, iApple ikhuphe emkhonweni wayo isicelo esitsha esibizwa Iindlela ezimfutshane, isicelo esinokuthi sibeke amanyathelo kwimiyalelo yelizwi. Umzekelo, sinokuxelela uSiri "Ukuza ekhaya" ukuba akhanyise izibane zeholo kwaye alayite ubushushu. Sinokuthi "sishiya umsebenzi" ukuthumela umyalezo kwiqabane lethu, kwaye uvule usetyenziso lweMaphu ukusixelela indlela enezithuthi ezimbalwa ekhaya.
I-Samsung Emojis, isivumela ukuba siyile ii-avatata ezizezethu ezivela kuthi, into ekwafumaneka ngokufika kwe-iOS 12 ngeMemoji kwi-iPhone. Ngombulelo kwiMemoji esinayo inani elikhulu lokukhetha ukwenza ubume bobuso bethu, amehlo, uhlobo lweenwele, umbala weenwele, imilo yempumlo ... ukuze sifumane esona siphumo silungileyo kuthi kwaye ke sikwazi ukubathumela ngosetyenziso lweMiyalezo.
Sisebenzisa njani isixhobo sethu
Kubo bonke abo bantu banenkxalabo malunga nokusetyenziswa kwezixhobo zabantwana babo, ngokufika kwe-iOS 12, uApple ubeka kuthotho lwemisebenzi, esinokuthi ngayo setha imida yokusetyenziswa kweeapps, imida esinokuyilawula ngomzali okanye ngeakhawunti yomgcini apho iakhawunti yomntwana inxulumene nayo.
Ngombulelo kulo msebenzi, asinakunciphisa kuphela iiyure zokusetyenziswa kwemidlalo okanye usetyenziso olufakwe kwi-iPhone okanye kwi-iPad, kodwa sinako kwakhona setha ishedyuli yevekil apho zinokusetyenziswa. Ukuba asifuni ukwenza ixesha lokusetyenziswa, isicelo sisazisa malunga nexesha lokusetyenziswa kwaso.
Musa ukuphazamisa imo ehlaziyiweyo
Musa ukuphazamisa imo nayo ifumene ukuphuculwa ngokufika kwe-iOS 12. Ukusukela ngoku ukuya phambili, singacwangcisa ixesha apho singafuni kuphazanyiswa kuxhomekeke kwindawo esihlala kuyo, xa umcimbi uphela, kude kube lusuku olulandelayo ... Ngalo lonke eli xesha, isikrini se-iPhone yethu asizukubonisa saziso esinokuthi siyifumane ngelo xesha.
Isicelo sokufunda iincwadi, ebizwa ngokuba ziiApple Books, endaweni yeeBooks. Utshintsho lwegama lesicelo luhamba notshintsho olupheleleyo lobuhle, ukusinika ujongano olufana nolo sinokulufumana kwiVenkile ye App. Icandelo apho zonke iincwadi esasizithengile ngaphambili okanye esizilayishe kwiakhawunti yethu ye-iCloud nazo ziphuculwe.
I-iPad, njengakwiinguqulelo ezidlulileyo, ifumana i-iOS 12 ii -apps ezintsha kunye neempawu kude kube ngoku azifumaneki kwesi sixhobo, ezinje ngesicelo seSitokhwe kunye nesishicileli selizwi. Ngokumalunga nesicelo sokugqibela, konke ukurekhodwa esikwenzayo kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad kuya kulayishwa ngokuzenzekelayo kwi-iCloud ukuze kufumaneke kuzo zonke izixhobo ezinxulumene neakhawunti efanayo.
ICarPlay ikwafumana iindaba, iindaba esizifumana kwizicelo zomntu wesithathu ezinje Iimephu zikaGoogle okanye iWave, usetyenziso oluza kubakho Ukusetyenziswa kukunxibelelana kwezithuthi ezihambelana nale teknoloji.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » IOS 12: yintoni entsha, izixhobo ezihambelanayo, indlela yokufaka kunye nokunye okuninzi
Sifundisa indlela yokufomatha iMac
Ungayivimba njani inombolo yefowuni